Ukukhutshwa kwamaso aMagnetic Nucleic Acid
Ixesha lokwenyani Inkqubo yokufumanisa i-PCR
Iingcebiso malunga nepipette
Ukutywina / ifilimu
Ipleyiti enzulu entle
Iityhubhu ze-CORBITION cryogenic ziyasebenza ekugcineni iisampulu zebhayiloji njengezinto ezinokusetyenziswa zelabhoratri, ezenziwe nge-polypropylene ekumgangatho ophezulu. Iindidi ezimbini zetyhubhu yentambo ziyafumaneka kugcino lweebhotile ngokusekwe kwiimeko: umsonto wangaphakathi kunye nomsonto wangaphandle. I-cryogenic vial s iyakwazi kwinkqubo yokugcina kubushushu obusezantsi -196 ℃. Isangqa se-silicone sifakwa kwi-cap cap ukukhusela ungcoliseko olubangelwa kukuvuza kolwelo ekugqibeleni kuqinisekisa ukhuseleko lweesampulu kwi-cryogenic vial.
Ukufakwa kwe-cap-coded cap iyafumaneka ngemibala esithoba ukwenza iityhubhu ze-cryogenic vial kube lula ukuyichonga. Indawo yokumakisha kunye nokuthweswa izidanga kuprintwe ngokucacileyo ngombala omhlophe kumbhobho we-tube kubasebenzisi bokumakisha kunye nokulinganisa. Zonke iibhotile zeSorfa cryogenic zifakwe ezingxoweni zenzala, i-RNase-free, i-DNase-free kunye ne-Non-pyrogenic.
Olu luhlu lweemveliso zamkele ukungeniswa okuphezulu kwezinto ezinobumba be-polypropylene, kwaye ziyamelana -80 ~ 121 ℃. Tight uyilo cap uyilo, non-ityhefu ukhuselo O-ring ukuthintela ukuvuza. Xa ugcina iisampulu, akufanelekanga ukuzizalisa ukuthintela ukuqhuma kombhobho. Olu luhlu lweemveliso zineenkcukacha ezintathu ze-0.5ml, i-1.5ml kunye ne-2.0ml, kunye ne-7 yemibala yokugubungela iyafumaneka.
Umzimba we-2 tube wenziwe ngezinto ze-polypropylene enokumelana nobushushu obuphantsi ukugcina imveliso izinzile kubushushu obuphantsi.
3.Can ukumelana lobushushu eliphezulu koxinzelelo oluphezulu inzalo.
Umzimba webhubhu unokukhethwa kunye okanye ngaphandle kwamanqaku okulinganisa.
5. Akukho DNA / i-RNA enzyme, akukho DNA yomntu, akukho endotoxin.
Kukho itywina lesilicone elitywiniweyo phakathi komsonto wokugubungela umbhobho wangaphakathi ojikelezayo kunye nomzimba wombhobho, onokuthi uqinisekise ukusebenza ngokutywina phantsi kwazo zonke iintlobo zeemeko ezinzima.
7.Made ukusuka UPS Plastic Class VI Polypropylene.
8. Iyafumaneka kwi-0.5 ml, 1.5 ml, 2 ml
Umsonto wangaphakathi kunye nomsonto wangaphandle wokukhetha
Ubume be-9U yangaphakathi ngaphakathi yevolumu yokusebenza ephezulu
Yokugcina lobushushu 10.Low: -196 ukuya 121 ℃
I-DNase-yasimahla, i-RNase-yasimahla, ayisiyo-pyrogenic
Inzalo kwinqanaba le-SAL 10-6
HAYI. Umthamo Inkcazo Cap Ukupakisha / Ctns Inzalo
Ikhompyutha 1.5ml Nkqo microtube Serew 8000 Ukhetho
PC0006 2.0ml Nkqo microtube Serew 6000 Ukhetho
PC0007 0.5ml Nkqo microtube Serew 8000 Ukhetho
Egqithileyo Intsholongwane ye-DNA / i-RNA Extraltion kit (iMagnetic Beads)
Okulandelayo: Ibhotile Reagent
0.5ml ezineengqayi cryogenic
1.5ml ezineengqayi cryogenic
Iimveliso ezinxulumene noko
Iteknoloji Changheng yasekwa ngo-2001 liqela lokuqala Foxconn kuyilo nokuvunda, processing kunye neqela leengcali lemveliso.
Nxibelelana nathi kwikhathalogu
Idilesi: Hayi. I-109, i-Dong kai Road, iDongjing Industrial Zone, iSithili saseSongjiang, eShanghai, China